I-Chapel - i-Boutique Bach - I-Airbnb
I-Chapel - i-Boutique Bach
Point Wells, Auckland, i-New Zealand
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Andrew
U-Andrew Ungumbungazi ovelele
Isonto eliyingqayizivele, eliguqulelwe 'lama-50s eline-retro, ukuhlotshiswa kwenkolo kancane enhliziyweni yedolobhana elinokuthula maphakathi nezindawo ezishisayo zase-Omaha & Matakana (mhlawumbe thatha umzila womjikelezo). Hamba uye endaweni yokugcina i-esplanade ukuze uthole ukucwiliswa okuphumuzayo emanzini afudumele echweba. Izingane zizothanda izinkundla zokudlala ezintsha nezinkundla zethenisi ezisendleleni ngenkathi uziphumulele ngekhofi elimnandi noma inhlanzi ewubukhazikhazi namashidi avela ekhoneni leDairy.
Woza uzojabulela isonto lethu eliyingqayizivele, eliguquliwe lama-1950 enhliziyweni yaleli dolobhana elincane. Inhlanganisela enhle yefenisha yakudala nentsha sha kanye nezinto zikagesi kanye nenhle, i-retro, umhlobiso wetimu yenkolo kancane.
Igumbi lokulala elihle le-Master liza nendawo yokufunda / yokuzindla. Igumbi eliseceleni njengamanje linemibhede emibili eyodwa, kodwa lezi zingahlanganiswa ukwenza okuphindwe kabili. Igumbi lokulala le-mezzanine lakhiwe ngombhede ophindwe kabili. Ikhishi (i-mini-ovini, i-microwave ne-cooktop), igumbi lokugezela lesimanje, indawo yokudlela/igumbi lokuhlala elifakwe ngokhuni, kanye negumbi lokuphumula elinelanga elihlukile eliholela endaweni evulekile ye-BBQ nezingadi.
Wonke amagumbi okulala anamatafula aseceleni kombhede, izindawo zokuphumula zepotimende futhi ngaphandle kwegumbi le-mezzanine, anamawodrobhu amakhulu.
4.87 · 124 okushiwo abanye
Enye yezindawo eziningi zaseKiwiana ezisele eNew Zealand; maphakathi ne-Omaha ne-Matakana. Zinike isikhathi sokuhambahamba endaweni yokulondoloza i-esplanade futhi ulalele ukuphila kwezinyoni ngobuningi, noma uzipholele emanzini acwebile e-Whangateau Harbour. Jabulela izinhlanzi ezinhle kakhulu ezintsha namaships alandelwa u-ayisikhilimu ogoqiwe ovela eSitolo Esijwayelekile ekhoneni. Mhlawumbe thatha indlela yomjikelezo oya e-Omaha noma e-Matakana.
Ngaphakathi kwama-500m; Isitolo Esijwayelekile, izinkundla zokudlala, irempu yezikebhe namajethi, inkundla yethenisi, umtapo wolwazi.
Ngaphakathi kwe-2km; I-Mini-golf, i-Country Farm Park, ukugibela amahhashi, i-Art Galleries, izindawo zokudlela ezihamba phambili ezimbalwa.
Ngaphakathi kwe-5km; I-Farmers Market, Izivini, Amasinema, Amathilomu, I-Boutique Shopping, Inkundla yegalofu, i-Omaha Beach
Ushiywa uzenzela wena, kodwa sihlala endaweni ngemuva uma usidinga nganoma yini.
Hlola ezinye izinketho ezise- Point Wells namaphethelo